Ụda | January 2020
Otu esi emeputa ekweisi na igwe okwu
A na-eji ekwe ntị na ekwenti mee ihe dị ka isi isi maka ama ma ọ bụ kọmputa. Na ya, ị nwere ike ọ bụghị naanị na-ege ntị na egwu na fim, ma na-ekwurịta okwu - kwuo na ekwentị, egwu na Web. Iji họrọ ngwa ngwa, ịkwesịrị ịtụle atụmatụ ha na àgwà nke ụda ha nwere.
Mkpọtụ nke ndị Fans nke usoro usoro ahụ bụ àgwà na-adịgide adịgide nke kọmputa nke oge a. Ndị mmadụ na-anụ ụda dị iche: ụfọdụ ndị na-adịghị achọpụta ya, ndị ọzọ na-eji kọmpụta ruo oge dị mkpirikpi, enweghịkwa oge iji daa ụda olu a. Ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọta ya - dị ka "ihe a na-apụghị izere ezere" nke usoro usoro kọmputa nke oge a.
Gini mere igwe okwu anaghị arụ ọrụ na ekweisi, na otu esi edozi nsogbu a
Igwe okwu dị ogologo aghọwo ihe dị mkpa maka kọmputa, laptọọpụ ma ọ bụ smartphone. Ọ bụghị nanị na-enyere aka ikwurịta okwu na "Aka Free" mode, ma na-enye gị ohere ịchịkwa ọrụ nke akụrụngwa site na iji iwu olu, okwu gbanwere na ederede na ịrụ ọrụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. Ụdị ihe kachasị adaba bụ nkọwa dị iche iche bụ ekweisi na igwe okwu, na-enye ụda olu zuru ezu nke ngwaọrụ.
Ụda na ụda dị iche iche na ekweisi na ndị ọkà okwu: ebee si bịa na otu esi ewepu ya
Ezi ụbọchị. Imirikiti kọmputa (na laptọọpụ) ejikọrọ na ndị ọkà okwu ma ọ bụ ekweisi (mgbe ụfọdụ). Ọtụtụ mgbe, na mgbakwunye ụda nke ụda, ndị ọkà okwu na-amalite igwu egwu na ụdị ụda ọzọ dị iche iche: mkpọtụ mpịakọta mkpọtụ (nsogbu dịkarịsịrị njọ), mgbagwoju anya, ịma jijiji, na mgbe ụfọdụ a na-ama ụda.
Kedu ihe mere na enweghi ụda na kọmpụta ahụ? Nweghachi olu
Ezi ụbọchị. Isiokwu a, dabere na ahụmahụ onwe onye, ​​bụ ụdị nchịkọta ihe kpatara ya nke ụda ọ bụla nwere ike isi na kọmputa. Ọtụtụ n'ime ihe ndị kpatara ya, n'ụzọ, nwere ike iwepụ onwe gị kpam kpam! Iji malite, ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị na ụda ahụ nwere ike ịkwụsị maka ngwanrọ na ngwaike.
N'ihe banyere usoro ihe di iche iche nke ndi mmadu na olu olu "Yandex Station"
Yandex buru ibu nke Russia choputara onwe ya "colony" maka ire ere, nke nwere ihe ndi ozo site n'enye aka site na Apple, Google na Amazon. Ngwaọrụ ahụ, nke a na-akpọ Yandex.Station, na-efu 9,990 rubles; naanị ị nwere ike ịzụta ya na Russia. Ọdịnaya Gịnị bụ Yandex.Station Nhazi na ọdịdị usoro mgbasa ozi Ịtọlite ​​na ijikwa ọkà okwu dị elu Ihe Yandex nwere ike ime.
Kedu ihe mere laptọọpụ laptọọpụ ahụ? Kedu otu esi belata ụda site na laptọọpụ?
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na laptọọpụ na-enwekarị mmasị na: "Ntak nwere ike ịmepụta kọmpụta ọhụrụ?". Karịsịa, ụda nwere ike ịhụ anya na mgbede ma ọ bụ n'abalị, mgbe onye ọ bụla na-ehi ụra, ma ị kpebiri ịnọ na laptọọpụ maka awa ole na ole. N'abalị, a na-anụ mkpọtụ ọ bụla ọtụtụ ugboro ike, na ọbụna obere "buzz" nwere ike ịmalite irighiri gị ọ bụghị naanị maka gị, kamakwa maka ndị nọ n'ime ọnụ ụlọ ahụ.
Jack, mini-jack na micro-jack (jack, mini-jack, micro-jack). Otu esi ejikọ igwe okwu na ekweisi na kọmputa
Ndewo Na ngwaọrụ ọ bụla nke oge a (kọmputa, laptọọpụ, ọkpụkpọ, ekwentị, wdg.) Enwere ntaneti: maka ijikọ isiisi, ọkà okwu, igwe okwu na ngwaọrụ ndị ọzọ. O yikwara ka ihe ọ bụla dị mfe - m jikọtara ngwaọrụ ahụ maka mmepụta ọdịyo na ọ ga-arụ ọrụ. Ma ihe niile anaghị adị mfe mgbe niile ... Nke bụ eziokwu bụ na ndị njikọ na ngwaọrụ dị iche iche dị iche iche (ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ha dị nnọọ ka ibe ha)!
Enwụrụ m akara ngosi akara ngosi - ugbu a enweghị m ike ịgbanwe olu. Ihe ị ga-eme
Oge dị mma maka mmadụ niile. Na nso nso a wetara otu laptọọpụ na arịrịọ iji "dozie". Mkpesa ndị ahụ dị mfe: ọ gaghị ekwe omume idozi olu ahụ, ebe ọ bụ na e nweghị akara akara (na-esote elekere). Dị ka onye ọrụ ahụ kwuru, sị: "Emeghị m ihe ọ bụla, akara ngosi a ama okụrede ...". Ma ọ bụ ka ndị ohi na-ada ụda? 🙂 Dịka o siri pụta, o were ihe dị ka nkeji ise iji dozie nsogbu ahụ.
Echefu ụda na laptọọpụ: ihe kpatara na ngwọta ha
Ndewo Ọ dịtụghị mgbe echere m na enwere nsogbu dị ukwuu na ụda! O doro anya na ọ bụ eziokwu - ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ na-eche eziokwu ahụ na n'otu oge, ụda dị na ngwaọrụ ha akwụsịla ... Nke a nwere ike ime n'ihi ihe dịgasị iche iche na, ọtụtụ mgbe, nsogbu nwere ike ịme onwe gị site na ịbanye n'ime ntọala Windows na ọkwọ ụgbọala ekele maka nke a, chekwaa ọrụ ọrụ kọmputa).
https://termotools.com ig.termotools.com © Ụda 2020